နံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင် – နံပါတ်အားဖြင့်အရောင်မှဂရိတ်ဆိုက်ကို, ဝင်ရောက်ခွင့် ကိုအရောင်အင်ဗာနှင့်အရောင် Scanner
ယောက်ျားတွေ, သင်ပန်းချီနှင့်ပုံရိပ်ကိုအရောင် passionate နေကြသနည်း ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အရောင်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုမြှင့်တင်ရန် သာ. ကောင်း၏။ သင်သိနိုင်အောင်အမျှ, သင်သည်သင်၏ပန်းချီကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနှင့်သင့်ပန်းချီရလဒ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် Application တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ မဖော်ပြ, သင်အရေအတွက်အားဖြင့်နံပါတ်အွန်လိုင်း, ပရင့်ထုတ်ရန်အအရောင်အားဖြင့်အရောင်ရယူသို့မဟုတ်ပင်အရောင်အင်ဗာကိုသုံးနိုင်သည်။
ထို့နောက်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ထဲကသင့်ကိုကူညီပေးဖို့, ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။ အမှန်စင်စစ်ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောစိမ်းပြာအရောင်များနှင့် pastel အရောင်များအဖြစ်အမျိုးမျိုးသော options များ အသုံးပြု. သင်သည်သင်၏အရောင်ပုံများ၏ရိုးရှင်းနမူနာကိုငါပေးမည်။ ဒါကြောင့်ပဲသင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နေဖို့နဲ့ဖတ်နေပျော်မွေ့သေချာစေသတည်း
သငျသညျနံပါတ်သူ့ဟာသူအရောင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လျှင်ကောင်းပါပြီ, အအရင်ကဆိုရင်အဘို့, ကကြီးမြတ်ရလိမ့်မည်။ ထိုအဟုတ်, နံပါတ်အားဖြင့်အရောင်ဂိမ်းသို့မဟုတ်အခြားပန်းချီသင်ယူမှုပလက်ဖောင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောအထူး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဒီ feature ကိုသင်ထို့နောက်များအတွက်သင့်လျော်သောအရောင်ပုံရိပ်တွေကောက်ဆေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ဆွဲရန်အာကာသပေးသည်။ သင်သိပါလား? သင်အသုံးပြုနိုင်သောမြောက်မြားစွာ Image ကိုအရောင် Options ကိုရှိပါတယ်။
လက်တွေ့ကျကျ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန် Sketch အဖြစ်ပုံတစ်ပုံကိုပုံကြမ်းအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့နောက်နံပါတ်အွန်လိုင်းအင်္ဂါရပ်များကအရောင်သင်ကအပေါ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကြောင့်အရောင် Image ကို Options ကိုအများကြီးအားငါပေးမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ကပိုပြီးသဘာဝအလျောက်ဖြစ်စေအရေပြားအရောင် hex ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်, အရောင်စုံပန်းချီဒီဇိုင်းအဘို့, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာစိမ်းပြာအရောင်များသို့မဟုတ် pastel အရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်တို့တွင်အချို့သောသင်ပန်းကန်တွေ, ပတ္တူအပေါင်းတို့နှင့်ပန်းချီပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည့်သမားရိုးကျပန်းချီနည်းလမ်း run ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သငျသညျနံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်ပြေးအားဖြင့်သင့်ပန်းချီကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေဖို့ကြိုးစားလျှင်မူကား, ယနေ့ခေတ်, ကကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျနံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်ကနေရနိုင်, ဒီမှာသူတို့ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
•နံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်သင်ကအချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ 24 နာရီများအတွက်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
•နောက်ဆုံးမှာဒီ feature သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်ပန်းချီဒီဇိုင်း, ရှုခင်းပန်းချီနှင့်အများအပြားပိုပြီးအတွက်ပိုပြီးဖန်တီးမှုဖြစ်စေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအရေအတွက်အားဖြင့်အရောင်နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ တောင်မှသူတို့တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏အထူးအကျိုးခံစားခွင့်, features နဲ့ tools တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသင်သည်သင်၏ပန်းချီနှင့်အရောင်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်။ ထို့နောက်ကဒီမှာသူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာနံပါတ်အားဖြင့်ပရင့်ထုတ်ရန်အအရောင်ဟာသင်ထောက်ကူနှင့်အရောင် tools များလိုအပ်သည်။ ကဝင်ရောက်ဖို့, သင်အမျိုးမျိုးသောက်ဘ်ဆိုက်များကနေနံပါတ်အွန်လိုင်း Template အားဖြင့်အရောင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်သင်ကထွက် print ထုတ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရောင် tools တွေကနေတဆင့်အရောင်ပုံရိပ်တွေကိုပေးနိုင်ပါသည်။ မဖော်ပြ, သင် Crayons, ခဲတံအရောင်အဆင်း, အရောင်အမှတ်အသားများသို့မဟုတ်သုတ်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။
လူအပေါင်းတို့၏ဒုတိယ, သငျသညျဂိမ်းသို့မဟုတ်အခြားပန်းချီသင်ယူမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အရေအတွက်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီလိုပဲ, သင် site ကိုမှ login နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ကိုပန်းချီဆွဲနိုင်ပါတယ်။ လက်စသတ်လိုက်ပါတယ်တစ်ပြိုင်နက်, သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအရေပြားအရောင် hex အဖြစ်အရောင်ပုံများကောက်ခြင်းနှင့်ပုံပေါ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့! နံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်သင်အွန်လိုင်းသင်၏ယခင်အလုပ်ကယ်တင်နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာထုတ် print ထုတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အခုတော့သူကနံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်ဝင်ရောက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကိုရုံဤလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ထို့နောက်သင်ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လမ်းညွှန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ : နံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်ဝင်ရောက်ဖို့ခြေလှမ်းတို့ကဒီမှာခြေလှမ်းအဘယ်သူမျှမများလွန်းစကားချီးနှင့်အတူ
•အဆင့် 1 # အဆိုပါပုံရိပ် Upload လုပ်ပါ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်အမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှ image ကို download လုပျနိုငျခဲ့ပါသညျ။ သို့မဟုတ်ပါကယ့်သူတွေကိုပုံရိပ်တွေ၏ပုံရိပ်စေရန်အဆင်ပြေသည်။ သငျသညျနံပါတ်အွန်လိုင်းသင်ထောက်ကူစာရွက်အားဖြင့်အရောင်ပေါ်တွင်ပုံရိပ် upload သို့မဟုတ်ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။
•အဆင့်2# ဖော်ပြချက် Give
ဒုတိယအအပေါင်းတို့၏, သင်မကြာသေးမီကအပ်လုဒ်လုပ်ထားဘူးသောပုံရိပ်ကိုများအတွက်ဖော်ပြချက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျငါးသို့မဟုတ် ပို. ပင်စကားလုံးများကိုသုံးပါနှင့်သင့်ပုံရိပ်ကို၏အတွင်းပိုင်းအားလုံးရှုထောင့်ကိုဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။
•အဆင့်3# အဆိုပါအရောင်များ Pick
လာမယ့်အဘို့, သင် Image ကိုအရောင်များ Option ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးနံပါတ်အရောင်နိုင်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့ကပုံရိပ်တွေကိုပိုပြီးလှပစေဖို့သင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအဘို့, သင့်ပုံရိပ်ကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်ဟုအချို့သောအွန်လိုင်း hex Options ကိုရှိပါတယ်။
•အဆင့်4# ပု Submit Button ကိုနှိပ်ပါ
သငျသညျနံပါတ်သင်ထောက်ကူစာရွက်အားဖြင့်အရောင်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီပြီးတာနဲ့သင်ကတင်သွင်း button ကိုထိမှန်ခြင်းနှင့်ရလဒ်ရဖို့ခဏစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ may အဆိုပါပုံရိပ်အရောင်ရလဒ်ဖျော်ဖြေဖို့ငါးသို့မဟုတ်ပင်ဆယ်မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်။
•အဆင့်5# အဆိုပါရလဒ် Check
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ရလဒ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင်အွန်လိုင်းကသင်၏အလုပ်သိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်တောင်မှ Download ပြုလုပ်ရန်အဘို့အဤအပိုင်း၌, ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့သင်၏ယခင်ပန်းချီပုံကြမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေပြားအရောင် hex, pastel အရောင်နှင့်စိမ်းပြာအရောင်အသေးစိတျကိုပိုပြီးအထင်ကြီးလှပါတယ်။
သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအဘို့, သငျသညျနံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်ဝင်ရောက်ဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်နှစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ applications များရှိပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသင့်ရဲ့ပုံကြမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်လျော်အရောင်ပုံရိပ်တွေကိုဖေါ်ထုတ်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။ နှင့်အညီ, ဒီမှာ apps များနေသောခေါင်းစဉ်:
ပထမတော့, သင်သည်သင်၏ပုံကြမ်းပေါ်အရောင်ဖြည့်ပါမှအရောင်အင်ဗာကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ app ကတဆင့်, သင်ရရှိနိုင်အွန်လိုင်း hex အရောင်များနှင့်အခြား RGB အရောင်ကောက်ယူသူ Options ကိုတဆင့်အွန်လိုင်းအရေအတွက်အားဖြင့်အရောင်စတင်နိုင်ပါသည်။ သေချာတာပေါ့, သငျသညျ pastel အရောင်စုဆောင်းခြင်း, အရေပြားအရောင် hex အများအပြားကပိုရနိုင်။
ဤအတောအတွင်းသငျသညျလညျးသငျမကြာသေးမီကအပ်လုဒ်လုပ်ထားဘူးသောရုပ်တုဆင်းတုများ၏အရောင် collection များကိုဖော်ထုတ်ရန်အရောင် Scanner ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အွန်လိုင်း Scanner များကအရောင်သင်ကရလဒ်ပြသင်ကပြုပြင်မွမ်းမံရန်အာကာသကိုငါပေးမည်။
•သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာအရောင်အင်ဗာ App ကိုမှ Login
• image ကိုပုံကြမ်း Upload လုပ်ပါသို့မဟုတ်ဆွဲယူ
ပန်းချီများအတွက်အရောင် Scanner သုံးစွဲနည်းဘယ်လိုနေသလဲ?
ယခုမှာကဒီမှာအရောင် Scanner access နှင့်သင့်ပုံရိပ်တွေကိုပိုပြီးဖော်ပြချက်အရအဆင့်ထိုနေသောခေါင်းစဉ်:
•သင့် PC မှာ Login သို့မဟုတ်အရောင် Scanner App ကိုမှတက်လက်မှတ်ထိုး
ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေ! ဒါဟာနံပါတ်အွန်လိုင်းခြင်းဖြင့်အရောင်နှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့သငျသညျအရောငျအင်ဗာသုံးပြီးအားဖြင့်သင့် image ကိုပုံကြမ်း coloring လေ့ကျင့်သို့မဟုတ် ပို. ပင်ဖော်ပြချက်အရအရောင် Scanner ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကပေါ်သင့်လျော်သောအရောင်အွန်လိုင်း hex လျှောက်ထားရန်မေ့လျော့နှင့်သင့်ရုပ်ပုံကိုပိုပြီးအထင်ကြီးစေမထားပါနဲ့။ ရှာဖွေစူးစမ်းသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ဖန်တီးမှုနေဖို့!